Daawo Ciidankii Khaatumo Oo Soomaliland Lawareegtay Balicad Iyo Masuuliyiin Ka Qayb Galay | Kalshaale
Daawo Ciidankii Khaatumo Oo Soomaliland Lawareegtay Balicad Iyo Masuuliyiin Ka Qayb Galay
Feb 13, 2018 - 37 Aragtiyood
Widhwidh(Kalshaale) Maanta Ayaa Degmada Balicad Ee G- Cayn Waxaa Lagu Wareejiyey 200 Oo Askari Kuwaasi Oo Ahaa Ciidanka Khaatumo
Munasibadii Cidanka Lagu Wareejinayey Waxaa Kusugnaa Wasiirka Amniga Khaatumo Keyse Cabdi Yusuf Wasiirka Warfaafinta Khaatumo Axmed Xaaji Cali Wasiirk K/x/ Maaliya Maxamed Cali Bashiir
Masuuliyiin Kale Oo Katirsan Xukuumada Khaatumo Taliyihii Ciidanka Lagu Wareejinayey Aaga Widhwidh Gaanshale Sare C/laahi Dheere Saraakiil Katirsan Cidanka Iyo Waxgaradka Deganakaasi Balicad
Wasiirka Amniga Khaatumo Ayaa Cidanka Wareejiyey Isagoona Sheegay In Ay Kamid Tahay Qadobadii Ay Ku Heshiiyeen Soomaliland Kana Uu Yahay Mid Fulay Maanta
200 – 200 = 000. Waa jug-jug meeshaadi joog. Waa la kala adeeganayaa. Waa un sida xaflad MEHER ah looga qeybgalo op Kale . Dabar la’aan MAYRACO ayuu Yiri Axmed Somali.
Allahayow maxay noqon, ninkii awrkii lacag siistays?
Waa xarfaan wexey ogyihiin pudland iyo somaliland midna in aysan waxba aheyn
Wexey go.aan ku gareen iyo hadba meel kusoo cunaan lacagaha kasoo xereedo dekadaha bosaaso iyo berbero maanta pudland beri somaliland
Dhulos gacan ayaan u taagay
Maxaa idinka galay intii ay ka imaaneyso dowlad somaliyeed cuna dekadaha deriskiina
Awalba emaraad iyo xabashi aan asxaan uga heyn ayaa cuni lahaa
Dagaal hunguri iga dheh
Waa dad dowlad waayey.Waa qeyb kamida qaranjabka
Waxaan uubataayaba tolkay ooda soojabi
Dhulbahante wuu tashaday wuxuu ogaaday in wax dowlada oo somaliya layidhaa inaanay jirin oo dib logunoqday 60 kii aduunkuna sidaa uqaabeeyay wadahadal waqooyi iyo koonfurana loo wadahadlayo somaliland iyo somaliya sidaa darteed reer waqoyinimadii ayay aamineen guul somaliland qaladkii 60 kii hadaynu saxaynaa ama waa lakala tagi
Waa kooxdii caynaba ee siilaanyo mehersaday,muuse biixina dumaaley.
*inta badan iyo baaqigaa hadhi*.
Hadaanu aniga iyo laba islaamood oo kale soo hadhno,dhulbahante na dhamaantii iidoor iidoor raaco.
Walaahay bilaahey tolaahey,halganku wuu soconayaa,AF iyo adinba.
Kayse cabdi yuusuf,dhalasho ma yaqaan ee dhaladu yaqaan.
Aabihiin nacasnimada qaangaadhey ka wasa..
La ogaayoo Dhuloos malaha hogaan iyo kala dambayn! Macal ciyaal Faay Cali iyo Hawiyaha mooryaantooda ayaa maanta nidaam iyo kala dambayn ogol!
Maxaa ku dhacay Daraawiishtii 1901 millitary gaardinaya ahaa oo Faras 100 km ku socda xabad ka dul ridayey!
Walaahi aniga waa la yaabanahay cidaan!
Cali Injir iyo horgale la mid ah oo aamineen ayaa waalay!
Waar waa in yaroo kayse idin Kala soo dudey waagii hore, Dee intii buu idiin soo celiyey.
Ictiraaf bad u ooman yihiin,ee maalintii afar kirishboy oo dhuloos ahi idiin yimaadaan,naqasku haydinka soo baxo.
Dhedo roob noqon wayday.
Sxb nin facaa ah u shaxaad tahag amaan maaha!
Walaahi in Dhulbahante cidna wax uga baahdeen oo dhulkooda ka badan yahay hadday wax isku raci lahaayeen!
Hadalkaaga aflagaado ayaan u arkay.
Majeerteen dhiillada afkay dhamac ka muujaane
Nina uma dhaqaaqaan hadaan tooda loo dhicine.
Allaylehe Dhulbahante oon dhiman dhaxalyey idoore
Maxaa ku dhacay Daraawiishtii 1901 millitary gaardinaya ahaa oo Faras 100 km saacadii ku socda ayaga ku jooga xabad ka dul ridayey!
Raggii hanaanaca kufriga hoor kasoo qubi jiray=Dhuloos
Land of punt sxb yaa kuyidhi dhuloos ayaa libaaxyo ahaan jiray ma tariikhdii beenta ahayd ee afwayne ayaad runmooday kkkkkkkkkkkkk
Farxiya inaabti adigu dumar bad katahay waxba Haku dawikhin dhulbahante wuu diiday inuu majeerteen gidaar ama darbi isaaq kagagudban ahaado isaaq iyo majeerteen balankoodu waa yoocada
Adigaa aflagaado wado oon xishoneyn
Hadaan kula joogi lahaa gacanteyda ayaa ku gaari laheyd yaa nadel
Dhulos ilaaheybaa daris ka xumeeyay oo isaaq iyo majeerteen ku dhex beeray laakiin iyaguna wey u qayileyn waana ku saxan yihiin lacagta kasoo baxdo berbero iyo bosaaso waxaa inta badan la geyaa sool iyo sanaag iyadoon abaal looga heyn cidna
Reerku waa qaran wey ku adagtahay in ay qabiil ahaan u heshiyaan kaligoodna maaha waa somalida oo dhan
Idinkaba waxaa idinku kala dhexjiro tegreega barlamaanka idiin furro
Garqaad sxb aflagadada nagadaa dadka afka somaliga kuhadla isaaq dad kagobsan majiro dadkii somali jacayl idiinku yimid iyadoon qaarkiin ayna afgaranayn ayaad abaalkayagii kadhigtiin waxaan lasoojoobi karin se sifiican ayaanu idiin baray
Sxb somalida oo dhan ayaan gob aheyn maahan wax kaligiin idiin gaar ah
Laakiin idinku waxaad dheertihiin 30 sano ayaad dowlad sheeganeyseen maanta oo ay tahay 2018 ayaad taagan tihiin gabadhii yar ee xamar tagto waan xireynaa
Horta idinku dad wax isweydiiyo ma idinku jiraan?
Weli ma is weydiiseen 30 sano ee lasoo dhaafay waxa idiin soo kordhay ileen dadku waa in ay isweydiin maxaan faa. Iidnay iyo maxaa naga qasaaray?
Dhulbahantow habargidir kamayarid kamana dagaalyarid ee meel isuraaca oo labadaan qolo mid jabsada
Ok garqaad sxb 30 Sano waxaa nosoo korodhay in aanu sharaf iyo cisi kunool nahay oo matidayadii aanu nabad iyo wanaag badan u abuurnay oo aanu siyaasadii dariiq wanaagsan oo aduunku sheegay in aanu kaduwanahay somalida koonfureed marka xigta intaaba adigu mahaysid adigoo dowlad LA aqoonsan yahay ayaan haystaale ma awoodin intaa aan qabsaday in aad samayso dhulkaaga magaalo magaalo daadhi loo kalaraaco majirto maamul goboleed Cid ka Amar qaataa majiro anaga 5 tii gobol ee somaliland amaba goboladii waqooyi badhasaabo muse biixi magacaabo ayaa ujooga intaadoodhani waa waxaan kudheerahay mana samaysay kartid ayaandarada kugudhacday kuma muuqato tusaale reerka Arab layidhaa wadooyin ay magaloyinkooda tagta ayay samaysteen abgaal na ciidamo afrikaana ayaa goof kodii kuwaar diyeeya
Dhalinyarada isaaqa kii jaamac kabaxa ama dhanka liibiya utahriiba ama dhanka hawiyaha(xamar).marka siyaasada hargeysa taal wixii berbera kasoo baxa madaxdeena iyo waardiyayaasheena noo qeybiya miyaa
Sxb annagu maba diidin maalintii dowladdi dhacday ilaa iyo hadda waanu rafaneynaa oo naf malaheyn hadana waan kasii xumaanay madaama aan 6 dowladood aan noqonay
Hadda idinkii 30 sano kor leydiin soo eegaayay oo xitaa awood u lahaa in aad wadanka oo dhan isu xukuntaan dadkana isu keentaan hadaad weli joogtaan qofkii xamar tago waan xireynaa iyo nabadbaan ku noleyn maxaanba ku muranaa waa wax isma dhaantee
Garqaad sxb hadii dad garowshiiyo le aanu idinku ognahay wuxuun baanu yeelilahayn se dad runta kunool natihidin maalintii calimahdi aad u cimaamadeen ayaanu ogaanay waxaad tihiin dadku waa inaga magaaladu waa muqdisho inoowada howsha markaad tidhaahdeen ayaanu idin tusnay in aduunka rag kunool yahay oo aanu lasonoqonay waxayagii asxaan laysu falayaana majirto miiska soo fadhiista idinkoo miyir qaba ama waxbaa laqaybsan ama waa lakala guran
Land of punt Wuxuu Rabaa Inuu Dhulos Qoorta Kuugaliyo kk Hadduu Fahmilahaa Halkaad Ulajeedid Hadalkaada Kumuu Dhaheen Dhulbahante Ayaad Aflagaadeysay
Yuuku Danbaajin Ee Halgankaagii Halkii Ksiiwad
Farxiyo Oo Dhiriftay Ayaan Arkayay
Farxiyo Kashaadii Sooqaado Inta Aad Nooshahay Dhufeyska UguJir Reer Dariskaa
Inaad mooryaan tahay u malayn kkkkkk
Ma fikirkayga aan dhiibtay ayaad iigu gacan qaadi lahayd? Kkkkkk
Allow aan ku mudan, taas waa waxa federal loo noqday.
Ima taqaanide armaad cagaha wax ka daydaa markaa i aragtid?
Sxb waa run, dhuloos maaha dad dhul lahayn ama dad kale shaxaad uga baahan.
From Docmo killilka ilaa Ceerigaabo dega, siyaasada ayaa ka qaldan ilaa wax isku raacaan macal wiilka dhaleen Farmaajo wax uma qaban karo.
U fiirso waxaad qorayso. Dhulbahante cid Isaaqa oo colaad u qabtaa ma jirto.
Madasha waad ku cusubtahay 7 sano baan meeshan ka doodaa, qabiil aan ka difaacana waa Dhulbahante.
Somali girl, Farxiyo iyo Ciise ayaa inta hada meesha soo gasha iiga marqaatiya.
Dhulbahante waa i dhaleen, waan dhalay walaahay in aanan madal lagu maagayo oo aanan difaacin weligay eebe i joojin. Ilaahayna ima joojo.
Imataqaanide armaad cagaha wax ka daydaa bareejo fiican iga dheh reer magaalku madagalaan ee wey isu baala xoofteyaan
Horta mid ogoow aniga dhiigeygu 2 qabiil ayuu jecel yahay waa dhulbahaante iyo habar gidir xagooda laygama maro waayoo waa labada reer ee weligood gumeyste kusoo hoos geli karin laakiin waxaa ilaahey tol uga dhigay mudulood iyo majeerteen oo qaa. Iimin ah oo wexey usoo halgamaan meel cad ka qaato
Somaliya halka ay jaaniska badan ka heleen mudulood iyo majeerteen hadeey habar gidir iyo dhulos haaniskaas heli lahayeen meeshaan maanta majoogteen
Sxb reerku maamulkii khaatumo idinkeey idinka sameysan waayeen oo geed dheer iyo geed gaaban u koray in uusan dhismin ilaa aad gaarteen in aad dhahdaan wexey Somali ku lahayeen garoowe u hoos fariista
Adiguna waxaad mar walbo soo qortaa idinka kala garan meyno waxaad soo qortaa viva somaliland adigoo iyaga ugu darnaanaayo waxaad soo qortaa haddalo badan oon istaahil ageyn ilaahaan kugu dhaarshee sidaas miyey xaq u leeyihiin?
Muduloodka ayaa idin dhaamo oo habar gidir u sameeyay maamulka galmudug
Dhulos tolnimaa ku jirto moyee wexey aheyd in ay mar hore muran idinka geliyaan dekadda bosaaso
Anaa kaaga marqaati in weligaa Dhuloos difaac u tahay xitaa haday ku caayaan u jawaabin!! Kkkkkkk
Dadka kale daaqada kala baxdo..kkkkkkkk
Kolay in reer Abti kuu yihiin u malayn ama in Somaliland nationalist tahay oo xuduudkii Engriiska rabto in xirto xalaashan u dulqado inta dantaada gaarayso!!
Waxaan isweydiiyaa tolow haddii Somaliland la aqoonsado Laalays muxuu qori lahaa?
Kusoo fariista Faqashyahay mise difaaca Dhuloos meesha ayuu ka wadi lahaa? Kkkkk
Laalays maalinta la idin aqoonsado waxaan u malayn i Harti adoon ah la arko!! Kkkkk
Diradire igama aha ee waa suaal meesha ku jirta!!!!
Iidoor dowlad international ah noqday sidee minoritiga Harti iyo Gudabiirsay iyo Gabooye ula dhaqmi lahaa! Big quetion.
Laalays cidna kaama qaadi karto in Dhuloos sharafto, taas doqon aan waxa qorto aqrin ayaa ogeyn!
Garqaad Waad iga yaabisey horta maxaad ka hadashaa habargidir halgantey oo mudulood kamaqan yahay xagee kadhacdey? Yaab yaabkiis xaqiraada waa waxa somali hore uga socon waysey inta beel kaliya la daajinayo beelaha kalena laga dhigaayo in baruur gacmaha kuheysteen oo iyaga la xoreeynayey waryaa halakugu dhaarto rag dalkan uso halgamey muddlood iyo mjba wa lahaayen ee kada liiditida reeraha.
Habagargir oo Hiraab jooga Harti lama sina, dadka ilaah ayaa badiyey!
Kasoo tag! Majeerteen doqon maaha in Sool iyo Sanaag maamul gobol noqdaan waa rabnaa ee waa in marka hore nidaam adag la sameeyaa iyo dad midaysan ka dib heshiis cid ka maqnayn lagu dhawaaqaa, Somaliland taas waa ogtahay oo in dhicin rag u kiraysteen Lacag badan ku bixiyeen.
Puntland xitaa shir u qabato laga diiday aan cid Dhuloos ah fadhiyin.
Puntland si arinkaas u xaliso wasiirada arimahaas hoos yimaadaan waa wada Dhuloos ee Puntland.
Wasiirka arimaha gudaha
Wasiirka Xiriirka dibedda
Intaas wax waa qaban waayeen…waayo Isaaqu waa ka aqli badan yihiin Hartiga.kkkkkkkkkkk
Xitaa wasiirada ilaah dhaqaalaha sida Kaluunka iyo dekedaha waa Dhuloos……
Horgale ayaa ka muhiimsan
Aniga is deji Garqaad waa Sacad badow ah..kkkkk
Haddii Mudulood iyo Majeerteen wax ahayn Habargidir oo qas iyo colaad ka shaqeeye oo ayaga wada hadlibkarin iyo Dhuloos oo wada hadli karin oo wax isku raaca laga la’yahay.
Bal kaalay adiga Dhuusamareeb iyo Cadaado isku keen ama Dhuloos meel isugu keen.
Mudulood ha is dileen laakiin waa rag miis go’aan wada qaadan kara Majeerteen la mid.
Kana tira badan!😂
Marka warka Garqaad iska hadle kasoo qaad…kkkkk
Habargidir ha mideeyo markaas war laga dhageysan…
Somali girl salaan sare walasheey qaaliya
Oo miyaad joogtay inteey maqan tahay xogaa ku xad ayaan is lahaaaaaaa
Sarbeebteyda maadan fahmin abaayo
Waan soo dhaweynaynaa midnimada Soomaalida Waqooyi.
Si aan u gaarno midnimo dhab ah waa inaan ka shaqeyno Koofur mid ah iyo Waqooyi mid ah, ka dib waxaan gaari doonaa Soomaali mid ah.